WINDOWS ကို - ဆောင်းပါးများ - 2019
ဤတွင် operating system ကိုစနစ်ပြန်လည်နာလန်ထူ, ပြဿနာဖြေရှင်းနှင့်အခြားတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအတွက်တပ်ဆင်ခြင်း, configuration များ, စစ်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း Windows7နဲ့ Windows 8.1 များအတွက် site ၏အပေါငျးတို့သညျအခွခေံ contents တွေကိုဖြစ်ကြသည်။
သီးခြားစာမျက်နှာတွင် - က Windows 10 ညွှန်ကြားချက်များ
Windows 8.1 ကို Install လုပ်ခြင်း
built-in system utilities က Windows 10, 8 နဲ့သိရန်အသုံးဝင်သည်အရာက Windows 7,
မူရင်းက Windows 8.1 ကိုတစ်ဦးက ISO image ကို download လုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 8.1 ကိုတစ်ဦး bootable disk ကို Creating
Windows 10 ကို bootable flash drive ကို
မှားယွင်းနေသည်က Windows 7, Windows 8 ကို install လုပ်သည့်အခါ "ဟုအဆိုပါ disc ကိုပေါ်တပ်ဆင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ" 10
Beginners များအတွက် Windows ကိုစီမံခန့်ခွဲ
ဘယ်လိုက Windows 7, Windows 8 ကိုအတွက်: D drive ကိုဖန်တီးရန်, နှင့် 10
Windows7ကို Windows 8 မှာ partitions ကို, 10 ပေါင်းစည်းဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 8.1 drivers တွေကို back up လုပ်နဲ့မှ 8
ဘယ်လိုက Windows 8.1 စနစ်ပြန်လှိမ့်ဖို့နဲ့ 8
(စီမံအုပ်ချုပ်သူကိုအခွင့်ထူးရဖို့) ကို Windows 8.1 နဲ့ 8 အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လို
သငျသညျရက်စွဲနှင့်အချိန်က Windows 10 တပ်ဆင်ခြင်း, 8 နဲ့ Windows ကိုဘယ်လိုသိသလဲ 7
LAN settings ကိုကို Windows နှင့်ဖိုင်တွဲများဝေမျှဖို့
Windows 8.1 ကိုအတွက် startup
တစ်ဦးက Windows 8 နှင့် Windows7အမှတ် restore
Windows7နဲ့ Windows ကိုအမှားအယွင်းများဆုံးအဘို့အစီအစဉ်ကို 8
Windows7နဲ့ Windows 8.1 ကိုများအတွက် compatibility Mode ကို
Windows 8.1 ကို - သစ်ကိုဖွင့်အဘယျသို့ download, upgrade ဖို့ဘယ်လို?
လုံလုံခြုံခြုံ Boot ကို disable လုပ်နည်း
Windows 8.1 ကိုအလုပ်လုပ်6နည်းလမ်းအသစ်များကို
Windows 8 ကို (နှင့် 8.1) ကိုသုံးလုပ်နည်း
Windows 8 ကိုအတွက် BIOS ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
Fix ရန်ကဘယ်လို - သင်က Windows 7, 8 နဲ့ 10 မှာယာယီပရိုဖိုင်းနဲ့ log in ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း
Windows ကို Install လုပ်ခြင်း bug တွေကို fix လုပ်ဖို့ဘယ်လို disc ကိုတစ်ဦး GPT partition ကိုစတိုင်ရှိပါတယ်ကတည်းကမဖြစ်နိုင်ပါ
အဘယ်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နဲ့ Windows 8.1 application များနှင့်စတိုးဆိုင် 8 ကို install ပါလျှင်မရမှ
Windows Update ကို Fix ရန်ကဘယ်လို
အခမဲ့များအတွက် Windows ကို Virtual Machine ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
ဘယ်လိုက Windows7မှာတစ်ဦး VHD ကိုဖန်တီးရန်နှင့် 8 (8.1)
Windows 8 နဲ့ Windows အတွက် AHCI enable လုပ်နည်း 7
Windows System File တွေကို Verify
ငါက Windows Experience Index 8.1 ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
သငျသညျကို Windows 8.1 အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါ5အမှုအရာ
အဘယ်မှာရှိသည် Windows 8.1 လုပ်ငန်း x86 နဲ့ x64 (မူရင်းက ISO, 90 ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်း) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
သုံးယောက် Windows အတွက်တဲ့အခါ boot disk ကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများနှင့်အခြားပုံရိပ်တွေများ၏ဖော်ပြချက် - တစ် Boot တက် disk ကိုအောင်လုပ်နည်း။
Windows7ကိုအတွက် SSD ကို drive ကိုချိန်ညှိခြင်းနဲ့ 8
Windows တွင် SSD ကိုများအတွက် TRIM enable လုပ်နည်း
ဘယ်လို MBR တစ် GPT disk ကိုပြောင်းမှ
ဘယ်လိုက Windows 8 မှာစကားဝှက်ကို disable လုပ်ဖို့နဲ့ 8.1
Windows 8 ကိုအတွက် SmartScreen disable လုပ်နည်း
အဘယ်သို့ငါ (ကကျဆင်းနေခြင်းမရှိဘဲ) ကစီမံခန့်ခွဲသူစကားဝှက်ကို Windows7ကိုသို့မဟုတ် XP ကိုသိလား
Windows7နဲ့ Windows 8 အတွက် hosts file ကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ကိုဘယ်လို
Google Chrome ၏နယူးအင်္ဂါရပ်တွေကို Windows 8 နှင့် 8.1
Windows7နဲ့ Windows 8 ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများပြန်လည်။
မသိသောကိရိယာ၏ယာဉ်မောင်းရှာပြီး install လုပ်နည်း
Windows 8 ပွနျလညျထူထောငျနှငျ့ Windows 8.1 စနစ်ကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်ကို Creating
Windows 8.1 ကို install လုပ်သည့်အခါအဆိုပါသော့ကို fit ပါဘူး
သငျသညျကို Windows 8 ၏သော့ကိုဘယ်လိုသိသလဲ
Windows 8 နှင့် 8.1 ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာမှားယွင်းနေသည် 720 Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
အဘယ်မှာရှိအခမဲ့အဲဒီ ISO အများဆုံး (Ultimate) ၏ Windows7ကို image ကို download လုပ်ပါနှင့်တရားဝင်ရန်
Windows7ကို install လုပ်ခြင်း
Windows7ကို install လုပ်သည့်အခါတုံ့ပြန်နှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်း set ရပ်
Windows XP ကို ​​install လုပ်ခြင်း
အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည့် Windows 8 ကို download လုပ်လုပ်နည်း
Windows စကားဝှက် (လူတိုငျးအတှကျလှယျကူသောလမ်း) ကို reset လုပ်နည်း
(Windows ကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင်) သင့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်အပေါ်စက်ရုံတွင် settings restore လုပ်နည်း
လက်ပ်တော့အပေါ် Windows7ကို install လုပ်နည်း
မည်သို့မှ re-install Windows 8 ကိုတစ်ဦးလက်ပ်တော့အပေါ်
Windows 8 ကိုတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူပုံရိပ်ကို Creating
Windows7ကိုမစတင်အဘယ်ကြောင့်
Windows ကို install လုပ်မယ့် disk ကို partitioner ကဖို့ကိုဘယ်လို 7
သငျသညျပုံစံချပေးမရှိဘဲတူညီသော hard disk ကို partition ကိုအပေါ်ကို Windows ကို reinstall ပြီးနောက်ပေါ်လာသောတစ်စက္ကန့်ကို Windows7နဲ့ windows 8 boot menu ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို။
သငျသညျကို log in အခါစကားဝှက်အချက်ပေးဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို Windows စကားဝှက် 8. ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ် reset နည်း။
ယာဉ်မောင်းနှင့်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် install လုပ်နည်း
Windows 8 ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါနဲ့ Windows7ကို install လုပ်နည်း
Windows ကို၏သော့ကိုအသုံးပြုပြီး, Window 8.1 ကို download လုပ်လုပ်နည်း 8
လြှို့ဝှကျကို Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရန်ကဘယ်လို
ဘယ်လို Windows 10 ကိုတစ်ဦးလင်းနို့ဖိုင်ကိုဖန်တီးရန်, Windows7နဲ့ 8
မှားယွင်းနေသည်စိစစ် DMI ရေကူးကန်မှာ Data ကွန်ပျူတာစတင်သည်သောအခါ - fix ဖို့ဘယ်လို
Windows7ကို d3dcompiler_47.dll အဘို့ကို download free လုပ်နည်း
တရားဝင် site မှဒေါင်းလုတ်လုပ် X3DAudio1_7.dll
ဤစက်ကိရိယာ (Code ကို 12) အတွက်မှားယွင်းနေသည်အလုံအလောက်မရှိပါအခမဲ့အရင်းအမြစ်များကို - ပြုအဘယ်သို့
Fix ရန်ကဘယ်လို - စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ကွန်ပျူတာဟာ operating ကန့်သတ်မှပယ်ဖျက်ထားလိုက်ပါပြီ
သငျသညျ Visual C ++ 2015 နှင့် 2017 ကို install အခါအမှား 0x80240017 fix ဖို့ကိုဘယ်လို,
တစ်ဦးကို flash drive ကနေ Windows ကို Install လုပ်ခြင်း, တစ်ဦး bootable USB drive ကသို့မဟုတ် disk ကိုဖန်တီးဖို့
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Windows ကို operating system ကိုတပ်ဆင်များအတွက် bootable USB flash drive တွေကိုဖန်တီးဖို့အသေးစိတ်တပ်ဆင်ခညွှန်ကြားချက်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ။ သင်တစ်ဦး netbook အပေါ်ကို Windows ကို install လုပ်ဖို့လိုခငျြသို့မဟုတ်ပဲ Windows ကိုဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ installation ကို flash drive ကိုရှိသည်ဖို့လိုတဲ့နေရာကိုအားလုံးကိစ္စများတွင်သင့်လျော်သော။
တစ်ဦး Boot တက်ပုံရိပ်က ISO ကို Windows ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Windows ကို Startup စာမျက်နှာအတွက်အစီအစဉ်များကို disable လုပ်နည်း
တရားဝင်အပြင်တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows 8 ကို install လုပ်ဖို့သုံးနည်းလမ်းတွေ,
Windows7Boot တက် drive ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Windows မှာလုပ်သုံးခုနည်းလမ်းတွေ 7
တစ်ဦး bootable USB drive ကဖန်တီးနေတဲ့ netbook အပေါ် Windows XP ကို ​​install လုပ်ခြင်း
BIOS ကို - ကို USB drive ကနေ boot တက်
Windows7နဲ့ windows 8 ကို install လုပ်ဖို့
တစ်ဦးနဲ့ Mac ပေါ်မှာ Windows ကို Install လုပ်ခြင်း
Installing Windows 8 ကို (ကအစီအစဉ်များနဲ့ settings တွေကိုချွေတာခြင်းမရှိဘဲအသစ်တခုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အဟောင်းပေါ်တွင်သန့်ရှင်းတဲ့ install)
လက်ပ်တော့အပေါ်ကို Windows ကို install (သို့မဟုတ် Windows ကို reinstall) လုပ်နည်း
သငျသညျ Windows7ကို install လုပ်သောအခါ, ကွန်ပျူတာ hard drive ကိုမမြင်ရပါဘူး
, BIOS ထဲမှာ drive ကိုကနေ Boot တက်ထားရန်ကဘယ်လို
အဘယ်သို့ပြုရမည် - Windows ကို install လုပ်သည့်အခါလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာထောက်ခံမှုကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း?
Windows 8 နဲ့ Windows 8.1
အသစ်က Metro interface ကိုအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တီထွင်မှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖော်ပြ Windows ကိုတစ်ဦးကစီးရီးကို Microsoft ကနေ operating system သစ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အတူအရင်ကဆိုရင် 8 ဆောင်းပါးများ, ။
Windows 8 ကိုမှာပထမဦးစွာကြည့်
Windows 8 ကို Pro ကိုမှ Upgrade
Windows 8 အတွက် Klondike Solitaire
ငါဘယ်လို windows 8 အတွက် input ကိုဘာသာစကား (ကီးဘုတ်) ပြောင်းပေးဖို့ကီးဘုတ် shortcut ကိုပြောင်းလဲပစ်ဘူး
ယင်းဘာသာစကားကို bar ကို restore လုပ်နည်း
customization ဝင်း 8
Windows 8 နှင့် 8.1 ဟာ Thread ကို install လုပ်နည်း
Installing Applications ကိုမီထရို
Windows 8 program တစ်ခုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 8 Start button ကိုပြန်ပို့မည့်အမှုမှာဘယ်လို
Windows 8 အလုပျအပိုင်း 1
Windows 8 အလုပျအပိုင်း 2
မိဘအုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်မှုကို Windows 8
Windows 8 graphical password ကို
Windows ကို restore တစ် bootable USB drive ကဖန်တီး 8
Windows ကိုအိမ် screen ပေါ်မှာ application များအဘို့သင့်အုပ်ကြွပ်အောင်ဘယ်လို 8
Windows 8 desktop ပေါ်မှာပေါ် My Computer ကို icon ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Windows operating system နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားပစ္စည်းများကို။
Windows 8.1 ကိုများအတွက် .NET Framework ကို 3.5 ကို download လုပ်လုပ်နည်း
Windows 8.1 ကိုရှိ Microsoft အကောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows 8.1 ကိုအတွက် user name ကိုပြောင်းလဲစေနှင့်ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ဒါဟာ Windows7ကို desktop ကို load, နဲ့ Windows XP မှာမထားဘူး
အဆိုပါဖိုင် extension သို့မဟုတ် Windows အတွက် file တွေကိုတစ်စုကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
ဘယ်လိုက Windows7မှာအိပ်စက်ခြင်း mode ကို disable လုပ်ဖို့, 8 နှင့် 8.1
အဘယ်အရာကိုန်ဆောင်မှုကို Windows7& 8 မှာပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်
Windows 8 နဲ့ Windows အတွက်အင်တာနက်အော်တို startup ကို configure ဖို့ကိုဘယ်လို 7
သငျ့လျြောသော Boot တက်စက်ကိရိယာနှင့်ရရှိနိုင်မျှ bootable device ကိုရွေးပါ Fix ရန်ကဘယ်လို
Windows System32 config ကို SYSTEM ဖို့ဖိုင်တစ်ခု restore လုပ်နည်း
Windows ကိုအပေါ် hosts file ကို fix လုပ်နည်း
ဘာ WinSxS ဖိုင်တွဲများနှင့်ဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရန် - အသေးစိတ်အတွက် Windows7မှာ WinSxS ဖိုင်တွဲရဲ့ contents ကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်နဲ့ 8
Windows တွင် keyboard shortcuts
ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ပေါင်း drivers တွေကို disable လုပ်နည်း
Windows7ကို, 8 နှင့် 8.1 အပေါ် autorun CD များနှင့် flash drive ကို disable လုပ်နည်း
Windows7ကို startup မှာသို့မဟုတ် update ကိုအပြီးပြန်တင်ဖြစ်ပါတယ်
Windows ကိုခုနှစ်တွင် Defragmenting - သင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှ
Windows 8.1 ကိုအတွက်အပြည့်အဝ Feature ကို Start Menu ကို
ရုရှားအဘယ်မှာရှိ Windows အတွက်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဘာသာစကားများနှင့်မည်သို့တပ်ဆင်ရန်
startup မှာ Windows 7
Registry Editor ကို အသုံးပြု. ကို Windows startup ကနေအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Soluto သုံးပြီး Windows ကို optimization နဲ့ PC Remote ထိန်းချုပ်
Windows ကိုဤ update ကို disable လုပ်နည်း
Windows 8 ကို, 8.1 နှင့်7အတွက်စေးကပ်သော့ကို disable လုပ်နည်း
Windows 8 ကိုတစ်ဦး disk ကို partitioner လုပ်နည်း
Windows7ကို Safe Mode ကို
Windows 8 မုဒ် Secure
Windows 8 ကိုလုံခြုံအောင်
Windows7ကို Boot Loader ကို Restore
စနစ်တစ်ခု image ကိုဖန်တီးရန်အတွက် Windows 8, running ကွန်ပျူတာပြန်လည်ထူထောင်
အသံ Windows7ကို install လုပ်ပြီးနောက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို
အသံ HDMI အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး - fix ဖို့ဘယ်လို
BOOTMGR ပျောက်နေ bug တွေကို fix လုပ်နည်း
BOOTMGR compressed ဖြစ်ပါတယ် bug တွေကို fix လုပ်နည်း
အဘယ်ကြောင့်ငါသည် Windows ကို Safe Mode ကိုလိုအပ်ပါဘူး
သငျသညျကို Windows ကို reinstall လုပ်ဖို့မလိုအပ်သည့်အခါ
အဘယ်အရာ hiberfil.sys ဖိုင်နှင့်မည်သို့ Windows တွင် hiberfil.sys ဖယ်ရှားပစ်ရန်
အရင်ကဆိုရင်အဘို့ကို Windows Task Manager ကို
ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကို download လုပ်လုပ်နည်း
အဘယ်အရာကို program ကိုဆွဲထားပါလျှင်လုပ်ဖို့
Windows7နဲ့ windows 8 အတွက်ဖိုင်အသင်းအဖွဲ့များ Restoring
ယင်း DNS ကို-ဆာဗာလိပ်စာပြောင်းဖို့မအောင်မြင်ဘူး: အမှားမှားယွင်းနေသည် 105 (အသားတင် :: ERR_NAME_NOT_RESOLVED) fix လုပ်နည်း
ယင်း၏အပြိုင်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမမှန်ကန်သောကွောငျ့, လျှောက်လွှာတင်နိုင်ပါအမှား fix လုပ်နည်း
Windows တွင် program တစ်ခုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows တွင်တစ်ဦး hard drive ကို format လုပ်နည်း
msvcr110.dll သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံး Msvcr100.dll, program ကို run မရနိုငျ
Windows Update ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
install လုပ်ပြီး install လုပ်ထား DirectX ကိုအဘယ် version ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုအဘယ်မှာရှိ DirectX ကို free download,
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် program ကို install လုပ်နည်း
Windows တွင် UAC ကို disable လုပ်နည်း
Windows တွင် drive ကိုစာတစ်စောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
အဘယ်အရာကိုအကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြား operating system ထက် Windows တွင်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Windows XP ကို ​​boot loader restore လုပ်နည်း
Windows တွင်သင့် screen resolution ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows တွင် shortcuts တွေကိုထံမှမြှားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows7နဲ့ 8 မှာက hidden ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများပြသနိုင်ဖို့ဘယ်လို
Windows တွင် GodMode (ဘုရားသခ Mode ကို)
သငျသညျကို Windows 8 သို့မဟုတ် 8.1 သို့ log သည့်အခါအားလုံးအသုံးပြုသူများကိုကြည့်ရှုရန်ကဘယ်လို
5 အသုံးဝင်သောကို Windows ကွန်ရက်ပညတ်တော်တို့ကို
အပိုဆောင်း software ကိုမသုံးဘဲကို Windows အတွက် VPN ဆာဗာကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အဘယျသို့လြှငျပျောက်ဆုံးသည် Windows အိုင်ကွန်များ
အသံတစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ်ကိုဆုံးရှုံးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
fix ဖို့ဘယ်လို - "အသံ output ကို device ကို install လုပ်ထားမထားဘူး" သို့မဟုတ် "နားကြပ်သို့မဟုတ်စပီကာနဲ့ချိတ်ဆက်မထား"?
Windows swap ဖိုင် - အရွယ်အစားကိုထိန်းညှိဖို့နဲ့ဘာကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သို့
ကွန်ပျူတာများ၏ IP address ကိုရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
bug တွေကို Windows Installer service ကို fix ဖို့ကိုဘယ်လိုမရရှိနိုင်
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုံအလောက်မှတ်ဉာဏ်မရှိပါ - ဘယ်လိုက Windows7မှာအမှား fix ဖို့နဲ့ 8
Windows ကို clipboard ထံရှင်းလင်းနည်း
Windows တွင်ကီးဘုတ် disable လုပ်နည်း
ခြားနားချက်မြန်ဆန်အပြည့်အဝ format နဲ့ကဘာလဲ
Windows ကိုအတွက် disk ဒါမှမဟုတ် flash drive ပေါ်တွင်ဘာ FOUND.000 folder ကို
Windows တွင်ချိန်ညှိခြင်း ClearType
Windows ကိုအတွက် hard drive ဒါမှမဟုတ် flash drive ကို icon ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows ကို Recycle Bin ကို 10, 8 နဲ့ Windows desktop ပေါ်မှာထံမှတောင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် disable လုပ်နည်း 7
Window များပေါ်တွင်သူမ၏ရန်ချောင်းကိုသို့မဟုတ်ပုံမှန်အက္ခရာမှတာဝန်ပေးအပ် drive ကိုစာတစ်စောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါလက်တော့ (အားသွင်းမရ, ဘက်ထရီချိတ်ဆက်) အားသွင်းမထားပါလျှင်အဘယ်အရာကို
အမှား fix ဖို့ကိုဘယ်လို msvcp140.dll မဟုတ်ပါဘူး
api-ms-Win-CRT-runtime က-l1-1-0.dll မကွန်ပျူတာပေါ်မှာ fix လုပ်နည်း
စတင်ခြင်းအမှား .NET Framework ကိုပလက်ဖောင်း4ပြင်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
64-bit နဲ့ 32-bit နဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ် Vcomp110.dll
Windows ကို x64 နဲ့ x86 များအတွက် msvbvm50.dll ကို download လုပ်လုပ်နည်း
ငါမော်ဒယ်ကွန်ပျူတာ Motherboard ကဘယ်လိုရှာရမလဲ
အဘယ်အရာကိုကို Windows ပေါ်တွင် dllhost.exe လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်အစီအစဉ်ကို COM အစားထိုးရပ်တန့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုအတွက်ရလဒ်များ
regsvr32.exe Processor ကိုတင်ပို့မည် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
Windows တွင်အတွက် DNS cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
gpedit.msc ကိုမတှေ့နိုငျသညျ - fix ဖို့ဘယ်လို
အဆိုပါ command prompt ကိုမှာ hard drive ဒါမှမဟုတ် flash drive ကို format လုပ်နည်း
, Window 10 အတွက်က Windows7နဲ့ 8 ကုဒ် 31 အမှားပြင်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို (ဤစက်ပစ္စည်းစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ်)
ဘယ်လိုက Windows 7, သင်၏ browser, Window 10 အတွက် proxy server ကို disable လုပ်ဖို့နဲ့ 8
သငျသညျ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခါစပယ်ယာဆွဲထားတဲ့လျှင်အဘယ်အရာကို
တစ်ဦးက disk ကိုဖတ်ပြီးသားအမှားဖြစ်ပွားခဲ့သည်အမှားပြင်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
SSD ကိုအမှားစစ်ဆေးခြင်းကို၏ status စစ်ဆေးလုပ်နည်း
ဗီဒီယို Watch: Windows 10 ကနပတပၚတင ဆမလဘ Phone Screen ပၚအငခတဆကနည (နိုဝင်ဘာလ 2019).